ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံး စားသောက်ဆိုင် | ခရီးသွားသတင်း
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံး စားသောက်ဆိုင်
Mariela Carril | 28/04/2022 17:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 30/04/2022 01:29 | gastronomy, Ibiza
နေရာကောင်းတွေကို ကြိုက်တယ် ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံအများကြီးနဲ့ ဝေးတော့ TV နဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ တွေ့လို့ အခြေချရမှာ။ ငါ့မှာ ပိုက်ဆံအများကြီးရှိရင် သန်းကြွယ်သူဌေးတွေအတွက် အဲဒီစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ဟိုတယ်တွေကို သွားပြီး ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မဟုတ်ဘဲ နေရာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အရသာတွေအတွက်ပဲ သုံးစွဲမယ်လို့ အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်။
စားသောက်ဆိုင်တွေအကြောင်းပြော၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဈေးအကြီးဆုံး စားသောက်ဆိုင်က ဘာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ အချိန်နှင့်အမျှကွဲပြားသော်လည်း၊ ယနေ့သည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စပိန် စားသောက်ဆိုင် ဘာလဲ Ibiza: လက်အား Sublimation ။
သင့်မှာ ပိုက်ဆံအများကြီးရှိရင် စပိန်၊ Ibiza မှာရှိတဲ့ ဒီစားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို သင်သွားခံစားနိုင်ပါတယ်။ တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 2014 အယူအဆဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Paco Romeroနိုင်ငံ၏အချက်အပြုတ်၏ရှေ့တန်းမှဘာသာရပ်။ ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ လုံလောက်တယ်။ Repsol ခြေဖဝါး ၃ လုံးနှင့် Michelin ကြယ် ၂ ပွင့်။ ဘာမှမကောင်းဘူး
ဒီစားသောက်ဆိုင်က ပေးတဲ့အရာက ဟင်းတစ်ပွဲထက် ပိုပါတယ်။ အချက်အပြုတ်အတွေ့အကြုံ ဘယ်မှာ နည်းပညာ၊ အစာအိမ်နှင့် ပေါင်းစပ်ပြသခြင်း။ အားလုံးအတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ထင်ရှားတာက ဟင်းလျာတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အရည်အသွေးကောင်းတာကြောင့် ဟင်းလျာတွေက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ စားဖိုမှူး Dani García၊ Toño Perez၊ Diego Guerrero နှင့် David Chang နှင့် မုန့်တိုက်စားဖိုမှူး Paco Torreblanca တို့ဖြစ်သည်။
အမှန်တရားမှာ ခြားနားမှုတစ်ခုကို အမြဲပြုလုပ်နေသည့် ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် စားသောက်ဆိုင်၏ စိတ်ကူးမှာ အစာအိမ်နှင့် အစားအစာ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာမက အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရုံသာမက အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတွင် ခြေတစ်လှမ်းပိုလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် နယ်ပယ်အားလုံးတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း တတ်နိုင်သမျှ နစ်မြုပ်နေသည့် အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။
ဒါကြောင့် အစားအသောက်ရှိတယ်၊ ဒီဇိုင်နာတွေရှိတယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်သူတွေရှိတယ်၊ နည်းပညာရှင်တွေ၊ အစုံဒီဇိုင်နာတွေ၊ ဂီတသမားတွေ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတွေနဲ့ တခြားအရာတွေရှိတယ်။ တကယ့်ရှိုးပွဲက ထမင်းစားသူတွေ ပတ်လည်မှာ ကြိုးကိုင်ထားတယ်။ဟောလိဝုဒ် သို့မဟုတ် ဘရော့ဒ်ဝေးတွင် အမြဲတွေ့မြင်ရသော အရည်အသွေးနှင့် ဉာဏ်ပညာရှိသူ။
sublimation တွင် လူ 12 ယောက်သာအခန်းရှိသည်။ စားပွဲအများအပြားတွင်မဟုတ်ဘဲ တစ်ခုတည်းတွင် နေရာချပေးသည်။ အစားအသောက်နဲ့ ဧည့်သည်တွေက ဇာတ်ဆောင်တွေဖြစ်ပြီး စားပွဲမှာထိုင်ပြီးကတည်းက ပွဲစတယ်။ ဆိုက်၏ အမြင့်တွင်၊ ၎င်းကို အမှန်တကယ် မမေ့နိုင်စေရန် ခေတ်မီနည်းပညာများပါရှိသော ရှိုးတစ်ခု။ ငါတို့ပြောနေတာက ဘာနည်းပညာလဲ။ ဟိ virtual reality...
စိတ်ကူးကတော့ ထမင်းစားလို့ရတယ်။ ထိုင်ခုံမှ မထွက်ဘဲ ခရီးသွားပါ။, space ,aဖြင့်ပြောင်းပါ။ ရုပ်ပုံများ၊ မီးများ၊ အမျိုးမျိုးသော ပရောဂျက်များနှင့် ဂီတဂိမ်း. တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ထူးခြားဆန်းပြားသော ဟင်းလျာများစွာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော မီနူးကို ခံစားလိုက်ပါ။ မီနူး၊ တစ်ဖန်၊ ပါဝင်ပါသည်။ ဟင်း ၁၄ လုံး၊ အချိုရည် နှင့် အချိုပွဲ နှစ်ခု. တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ခရီးဆက်သွားကြသည်။
အစားအစာသည် ကော့တေးဖြင့် စတင်သည်။တစ်ပုလင်းလျှင် ယူရို ၂၄၀ ကုန်ကျနိုင်သော အလွန်စျေးကြီးသော ဝီစကီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လက်လုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး များပြားလှသောရနံ့များပါရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချောမွေ့ဆုံး၊ ထူးခြားဆန်းပြားပြီး အရသာအရှိဆုံးအရာဖြစ်သောကြောင့် သင့်အာခေါင်နှင့်နှာခေါင်းတို့ကို ကိုက်စေမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောရလောက်အောင်ပင် လုံလောက်ပါသည်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်၊ သူတို့က အဲဒါကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ အဲဒါက ကောင်းမွန်တဲ့အစပါ။
မီနူးက အမြဲတမ်း မတူပါဘူး။ဒါပေမယ့် အများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်။ ပင်လယ်ထုတ်လုပ်သူဥပမာအားဖြင့် ကမာချဉ်၊ ဂုံး၊ ဘလိတ်ဂုံး သို့မဟုတ် ကော့တေးများ။ မီနူးမှာ ငါးနဲ့ အခွံမာတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ အခန်းတစ်ခုလုံးသည် ပင်လယ်နှင့် ၎င်း၏အနက်များဖြစ်လာသည်။. အလင်း၊ အရောင်တွေ...
ထို့နောက် မြင်ကွင်းကို ပြောင်းလဲပါ။ တောထူထပ်တဲ့ နေရာမှာ သင်ကိုယ်တိုင် တွေ့နိုင်လို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မှိုနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များစားခြင်း။ ဒါမှမဟုတ် အီတလီမြို့လေးမှာThe Godfather မှ သီချင်းဖြင့်၊ ဥယျာဉ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို မြည်းစမ်းပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ သုံးဖို့အလှည့်ရောက်လာတယ်။ တိုးပွားအဖြစ်မှန်မျက်မှန်. ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အားပေးဆောင်သော virtual reality သို့ အပြည့်အဝရရှိသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအချက်အလက် ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် ပါဝင်သော ပြင်ဆင်ချက် ချက်နည်းဖြင့် သင်စားမည့်အရာ။
အဲဒါကို စိတ်ကူးတောင်ယဉ်နိုင်မလား။ ဒါ အရမ်း Blade Runner မဟုတ်ဘူးလား။ ပြီးတော့ မင်း ၂၁ ရာစုထဲ ရောက်နေတယ်လို့ မင်းထင်တဲ့အခါ အံဝင်ခွင်ကျရထားပေါ်မှာ သင် ရုတ်တရက် ပေါ်လာတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ မင်းစားပွဲပေါ်က ဟင်းက လုံးဝမတူဘူး။ အာခေါင်နဲ့ မျက်လုံးတွေက အံ့ဩစရာတွေကို ရပ်တန့်မနေပါဘူး။
နေရာရှိပါသလား။ တရားပွဲ သို့မဟုတ် ဆပ်ကပ်ပွဲ? ဒါ့ပြင် ရောင်းချပေးမယ့် ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ ဟင်းပွဲတွေ၊ အရသာတွေဖြစ်ပြီး သင်မမြည်းစမ်းဖူးပါဘူး။ အဲဒါကို မင်းထင်လား။ အကင် ရိုးရိုးပဲလား။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခုထဲမှာ ဂီတနဲ့ အကက တွဲပြီး ထူးထူးခြားခြား ဝီစကီက ထပ်ပေါ်လာပေမယ့် အသားကင်ဆော့စ်မှာ ထပ်ခါထပ်ခါ ထပ်ခါထပ်ခါ ထပ်ခါထပ်ခါ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖော်ထားတဲ့ အရသာ၊ မီးခိုးငွေ့တွေနဲ့၊ အဲဒါကို သတိရပါ။ ဤနေရာတွင် အချိုရည်များသည် ကျွေးသော အစားအစာများနှင့် အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ပါသည်။ဒါကြောင့် စားဖိုမှူးတွေက အရာရာကို တွေးတောပြီးပြီ။ ပန်းကန်တစ်ခုစီတွင် အချိုရည်နှင့်အပြန်အလှန် တွဲပါရှိသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ထိုနေရာတွင် ပြင်ဆင်ပေးသော စားဖိုမှူးတစ်ဦးနှင့် ရောက်လာသော အချိုပွဲများသူ့နားမှာ ဒိန်ချဉ်ရေမြှုပ်၊ ထောပတ်ခရင်မ်၊ လိမ္မော်ရောင်အသားစလင်တို့ဖြစ်နိုင်သည်... ဒုတိယအချိုပွဲသည် ချောကလက်ကို ဝီစကီအသစ်ဖြင့် တွဲ၍ယူဆောင်လာကာ အလွန်စျေးကြီးသည်။ ၎င်းသည် ဖန်ခွက်ထဲတွင်သာမက အချိုပွဲကိုယ်တိုင်တွင်လည်း ပါဝင်ပြီး ကိတ်မုန့်ကို ၎င်း၏သစ်သားအရသာနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဟင်းတွေ ပေါများနေသလားတော့ မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒီမှာ မင်းက လုံးဝခြားနားတဲ့ အရာတစ်ခုကို ပေးနေတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။ ညစာစားလျှင် ယူရို ၂၀၀၀ ခန့်။ အများကြီးထင်ရပေမယ့်၊ တံဆိပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုဆိုရင် ယူရို ၂၅၀ နဲ့ ၆၀၀ ကြားကျနိုင်တဲ့ Ibiza စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အကြောင်း ပြောနေတာတော့ မဆိုးပါဘူး။ Pacha သို့ ၀င်ပေါက်သည် လူတစ်ဦးလျှင် ယူရို 250 ဝန်းကျင်ဖြစ်သောကြောင့် ဈေးနှုန်းများအကြောင်းပြောပါက Sublimotion သည် အခြားဂြိုဟ်မှမဟုတ်ပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့ သူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ ယူရိုငွေရှိသူတိုင်း ပေးချေနိုင်ပြီး အဲဒီညစာစားသူ ဆယ့်နှစ်ယောက်ထဲမှာ ရှိနေဖို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကံတရားတစ်ခုခုနဲ့ မင်းရဲ့အတန်းဖော်တစ်ယောက်ဟာ နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါဘယ်သူသိလဲ တရားအားထုတ်လိုစိတ်ရှိလျှင် ယူရို 1600 ဝန်းကျင်ပေးရသည်။ သင်သည် အတွေ့အကြုံကောင်းများ၊ အရသာများ၊ ရှိုး၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အရာအားလုံးသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး မမေ့နိုင်သော အရာတစ်ခုအဖြစ် နေထိုင်သွားတော့မည်ဖြစ်သည်။ စကားလုံးနှစ်လုံးဖြင့် အချက်အပြုတ်အနုပညာ။
ညစာစားဖို့ သာမာန်လူတွေက အဲဒီလောက် ပေးချင်ကြတာလား။ သေချာတာပေါ့၊ ကမ္ဘာ့ဖလားဖိုင်နယ်ကိုကြည့်ဖို့ လက်မှတ်တစ်စောင်အတွက် စေတနာအပြည့်နဲ့ ပေးချင်တဲ့ လူတွေရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ? ထမင်းစားသူများသည် Sublimotion ကို အလွန်စိတ်ကျေနပ်စေပုံရသည်၊ ထို့ကြောင့် အရာဝတ္ထုများကို ဝယ်ယူခြင်းထက် အတွေ့အကြုံများကို ပိုနှစ်သက်ပါက၊ အမှန်တကယ် မမေ့နိုင်သောညတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » Ibiza » ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံး စားသောက်ဆိုင်
Puerto de Santa María ၏ကမ်းခြေများ
Castellón de la Plana တွင်တွေ့ရမည့်အရာ